စစ်တပ်ဘာကြောင့်သမ္မတအပေါ်ရောက်နေလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » စစ်တပ်ဘာကြောင့်သမ္မတအပေါ်ရောက်နေလဲ
Posted by Wow on Jan 5, 2012 in Politics, Issues | 10 comments
အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီ (ကာလုံ)အဖွဲ့ဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ တခြားလုံခြုံရေးရာ ကိစ္စတွေကို ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မယ်မသိရသေးပေမဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိစ္စမှာ တော်တော် အရေးပါလာတာ တွေ့ရပါတယ်။
သာမန်အားဖြင့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတဲ့ကိစ္စ (power to grant amnesty) မှာသာ နိုင်ငံတော်သမ္မတဟာ ကာလုံအဖွဲ့ရဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့အညီ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးနိုင်တယ်လို့ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၀၄(ခ)မှာဆိုထားတဲ့အတွက် ကာလုံရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ ပုဒ်မ ၂၀၄(ခ)နဲ့သာ အကျုံးဝင်တယ်လို့ နားလည်ထားကြပါတယ်။
ကာလုံအဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦး
တနည်းပြောရရင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်လှမင်းနဲ့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး
ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုတို့ ၂ ဦးဟာ အရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေငြာနိုင်တဲ့ ၀န်ကြီးတွေမို့ ၀န်ကြီးအဖွဲ့မှာတောင် တခြားဝန်ကြီးတွေထက် အာဏာပိုကြီးမားတဲ့ ၀န်ကြီးတွေ ဖြစ်လာမဲ့အဓိပ္ပါယ် ဖြစ်ပါတယ်။
by ခင် ရတနာ on Wednesday, January 4, 2012 at 11:02pm
သိချင်တာများ ဂေဇတ်မှာ မေးနေသေး တယ်ဦးမင်းအောင်လှိုင်တို့ ဦးစိုးဝင်း တို့ကိုသွားမေးပါလား သူတို့အိမ်ကဝေးနေရင် ရဲစခန်းမှာသွားအော် လေ အဲ့လိုမှ အော်လို့မရ ရင် အလှူခံမန်းတပ် သွားပြီး လော်စပီကာနဲ့ အော်ခိုင်းလိုက်ရင်ပီးရော်
တကယ်တော့ သမ္မတက စစ်တပ်အောက် ရောက်နေတာပါ။
အဲဒါကို မပြင်နိုင်မချင်း အရပ်သားအစိုးမရလက်အောက်မှာပဲ နေနေရဦးမှာပါ။
ကရင် မယ်ဒလင် ပါပဲကွယ် …………
ဒီတိုင်းတိုင့်တိုင် ~~~~ ဒီတိုင်းတိုင့်တိုင် ~~~~
ဖတ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ ဦးဦးပါလေရာ၊ ချာတူးလန်၊ volcano101 တို့ရေ…
သမ္မတနဲ့ ကာချုပ် အားပြိုင်ပွဲမှာ ဒေါ်စုတို့ပါလွှတ်တော်ထဲရောက်လာပြီး အကောင်းဘက်ကို အမြန်ဆုံး ပြောင်းလဲလာဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်….
နိုင်ငံရေးအင်အားစုခြင်းအားစမ်းကြချိန်မှာ ချိန်ခွင်လျှာညီကြဖို့နဲ့ တရားမျှတဖို့သာ…..
အရှိန်အ၀ါတွေက ဦးသိန်းစိန်ကို အုပ်စိုးနေတုန်းဖြစ်မှာပါ သူတို့အထဲမှာလည်း နှစ်ဖွဲ့ကွဲနေတယ်လို့ကြားရပါတယ်
ရွေဘိုသားရေ နှစ်ယောက်ရှိရင်သုံးဖွဲ့ကွဲတာ တို့မြန်မာကွ…. ဒီလိုနဲ့ပဲ ဒီလိုနဲ့ပဲ
နိုးဗုတ် နိုးဗုတ်လို့ ဘာမှမသိပဲ အော်နေတဲ့သူတွေကို
ဘာလို့ နိုးဗုတ်တာလဲလို့ မေးကြည့်ဖူးတယ် ..
မကြိုက်လို့တဲ့ ၊ ဘာလို့ မကြိုက်တာလဲ ဆိုတော့ သူတို့လုပ်တာမို့လို့တဲ့
အဲဒီလိုပြောတာ ဥပဒေနဲ့ ကျောင်းပြီးထားတဲ့သူနော် …
အခုလို အချက်အလက်အတိအကျနဲ့ ပြောပြီး ဒါကြောင့်မကြိုက်ဘူးဗျာ ဆိုရင် လက်ခံရမယ်ဗျာ …
ကျွန်တော်လဲ အဲဒီ့အချက်ကို အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းမှာထဲက ဖတ်ဖူးတယ်ဗျ….
ကျွန်တော်လဲ သဘောမတွေ့ဘူး …
နောက်တစ်ခုက လူ့အခွင့်အရေး (၁၀)ချက်လဲ အပြည့်အစုံမပါဘူးဗျာ….
ဦးအောင်သင်းပြောသလိုဆိုရင်တော့ ဒါတွေက လူတွေရေးတာပါဗျာ…
လူညီတဲ့တစ်ချိန်ကျ ဤ ကို ကျွဲ ဖတ်ကြတာပေါ့ ..
Wow ရေးတဲ့ စာသားလေးပဲ ပြန်ရေးပြချင်တယ် ..
မှော်ဆရာရေ အဓိကကတော့ စစ်တပ်က အစဉ်အလာအရ ဖြုတ်၊ထုတ်၊သတ် က လျှင်သူလုပ်ကြစတမ်း ဆိုတော့ “ယုံကြည်ခြင်း” ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ်ကို သူတို့မသင်ခဲ့ရလို့ လို့ထင်ပါတယ်…
ဒီတော့ နစ်ကိုးကစ်မန်း ပါတဲ့ “Birthday Girl” ဆိုတဲ့ ကားလေးထဲကလို ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေကို ပေးတဲ့ Trust Training လိုမျိုးပေးရင် ကောင်းမလားလို့…. တွေးကြည့်တာပါ
အဲဒီ့ကားထဲမှာတော့ ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေကို ထရိန်နင်ပေးတာ လူတန်းနှစ်တန်းစီရပ်နေပါတယ်. ရှေ့က သင်ပြသူက လှဲလို့ အော်လိုက်တာနဲ့ ရှေ့တန်းကလူတွေက နောက်လှည့်မကြည့်ဘဲ ယုံကြည်စွာနဲ့ နောက်ပြန်ပစ်လှဲလိုက်ရပါတယ်၊ နောက်တန်းကလူတွေကလဲ လှဲချလာသူတွေပြုတ် မကျအောင် ဆီးဖမ်းရပါတယ်…ကိုယ့်နောက်ကျောကိုလှည့်မကြည့်ပဲ ယုံကြည်စွာနောက်ပြန် ပစ်လှဲချရတာ လက်တွေ့မှာ တကယ်ခက်တဲ့ အလုပ်ပါ… ကိုယ့်နောက်ကသူကို ငါဘယ်လိုကျကျ ဆီးဖမ်းမှာပဲ ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုမရှိရင် လုံးဝလုပ်လို့ မရတာပါ…..
မြန်မာပြည်အဖို့ရာမှာတော့ ခက်ခဲဦးမဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပါ….
မြန်မာပေါ်လစီအ၇ လက်နက်၇ှိတဲ့အဖွဲ့စီးကအထက်ကပါပဲ ထုံးစံလိုဖြစ်နေပါပြီ။
တိုင်းပြည်ကို ချစ်တဲ့ လူတော်တွေက ထောင်ထဲမှာ….
တိုင်းပြည်ကို မချစ်တဲ့ လူတော်တွေက နိုင်ငံခြားမှာ… (ဥမပါ…သူကြီး အဲလေ ဥပမာ သူကြီး) ဟီး.. စတာ
နင်ရယ်ငါရယ်ကလဲ တစ်နေ့တစ်နေ့ Online မှာပဲ…